Ungasusa njani i-cache yazo zonke izicelo ze-Android kwaye ufumane indawo yasimahla | I-Androidsis
Imemori efihlakeleyo inokusukela ekuqaleni kwekhompyuter ibe Omnye waboni xa isicelo singasebenzi kakuhle. Ukongeza, xa yonke into isebenza ngokuchanekileyo, akukho mntu ukhumbula ukubaluleka kwe-cache ekusebenzeni kwezicelo ngokubanzi.
I-cache inoxanduva lokugcina idatha / imifanekiso leyo zihlala zihlala zilungisiwe kwiphepha lewebhu okanye kwisicelo, ukuze xa ivuliwe, ayisiyiyo yonke imixholo esisinikwa yona ethi iphinde ilayishwe, kodwa ngumxholo omtsha kuphela, ukuba sithetha ngomkhangeli zincwadi. Into efanayo iyenzeka ngokusetyenziswa. Ukuba xa uhlaziya isicelo, ayibonisi imisebenzi emitsha, akwanelanga ukuyiyiqala kwakhona, kuya kufuneka sicoce i-cache yesicelo.
Njengoko ixesha lihamba, kwaye njengoko isixhobo sethu siqwalaselwe ukulawula inani le-cache elinokugcina, le ithatha indawo ngakumbi nangakumbi, nakwizihlandlo ezithile, kuhlala indawo yokugcina yangaphakathi yesixhobo, ingxaki ebaluleke kakhulu ngakumbi kwizixhobo ezinendawo yokugcina encinci.
Ngokwam, i-Android isinika ithuba lokuba cacisa i-cache yesicelo ngokukodwa, ukhetho olusivumela ukuba sazi ngokukhawuleza ukuba ukungasebenzi kakuhle okubangelwa sisicelo ngokwaso okanye inkqubo iphela. Ukuba emva kokucoca i-cache yesicelo esithile, inkqubo yethu iyaqhubeka nokusebenza ngokungalunganga, isisombululo sinokugqitha cima i-cache yazo zonke izicelo esizifakileyo.
I-Android iyasivumela yenza le nkqubo kunye ngaphandle kokuya kusetyenziswa ngesicelo. Ukuba ufuna ukwazi ukucoca i-cache yazo zonke iinkqubo, nanga amanyathelo ekufuneka elandelwe:
Okokuqala siya kwi Useto ye-Android.
Emva koko, cofa apha Izicelo. Eli candelo libonisa indawo ekuhlala kuyo usetyenziso, imifanekiso, amaxwebhu kunye nezinye iifayile ezifakwe kwisixhobo sethu.
Emva koko sicofa Idatha egcinwe kwiCaché.
Ngelo xesha, i-Android iya kusibonisa umyalezo osibuza isiqinisekiso sokucoca idatha egciniweyo zezicelo esizifakileyo. Cofa ku Yamkela yiyo loo nto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ungasusa njani i-cache yazo zonke izicelo kwi-Android kwaye ufumane indawo yasimahla